Horudhac: Liverpool vs Aston Villa… (Reds oo doonaysa inay goolal ku rusheyso Aston Villa si ay isaga illowdo ceebtii ka soo gaaray Man City) – Gool FM
(Liverpool) 05 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ee guuleysatay horyaalka Premier League ayaa garoonkeeda maqribnimada maanta ku soo dhoweynaysa naadiga Aston Villa oo ku jirta kaalimaha looga laabto horyaalka, iyadoo Tababare Jurgen Klopp uu doonayo inay kooxdiisu jawaab ka bixiyaan jugtii ka soo gaaray Manchester City.
Kulankii ugu horreeyey oo ay ciyaartay Reds tan iyo markii loo caleemo saaray horyaalnimada Ingiriiska waxa ay guuldarradii ugu cuslayd kala kulmeen Manchester City, laakiin waxa ay doonayaan inay waddada guusha dib ugu soo laabtaan marka ay qaabilayaan Villa.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 6:30 Marqibinimo xilliga geeska Afrika.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaan qabin wax dhaawacyo cusub ah kulankan ay garoonkooda ku soo dhoweynayaan Aston Villa.
Macallin Jurgen Klopp ayaa sheegay inuu doonayo inay xiddigihiisu bixiyaan jawaab adag, si xoog lehna ay u dheelaan inta ka dhimman xilli ciyaareedka.
Daafaca garabka bidix ee Villa, Matt Targett ayaa seegi doona ugu yaraan labada kulan ee soo aaddan, maxaa yeelay waxa uu dhaawac ka sheeganayaa muruqa lugtiisa.
Haddii ay taam yihiin labada ciyaaryahan ee Frederic Guilbert iyo Danny Drinkwater waxaa la filayaa inay ciyaaraan markoodii ugu horreysay tan iyo markii dib loo bilaabay ciyaarista horyaalka Premier League.
>- Kooxda Liverpool ayaa afar guul oo xiriir ah horyaalka Premier League ka gaartay Aston Villa, iyadoo cel-celis ahaan afartaas kulan la iska dhaliyey 13-3.
>- Si kastaba ha noqotee, Reds ayaa guuleysatay kaliya saddex jeer sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Aston Villa kula ciyaareen garoonka Anfield, waxaana labada kulan oo kale ay ku dhammaadeen 3 barbaro iyo 3 guuldarro.
>- Kulan ayaa ah kan ugu badan ee away ay labo kooxood ku adkaadaan taariikhda Premier League, iyadoo 20 guul oo bannaanka ah ay kala gaareen, 14 kulan waxaa soo adkaatay Liverpool, halka Aston Villa ay badisay lix kulan iyadoo marti ah.
>- Kooxda dhowaan ku guuleystay horyaalka ayaa guuldarro la’aan ah 56 kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka, iyadoo si xiriir ah u adkaatay 23-kii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Liverpool ayaa guuldarro la kulmi karta labo kulan oo isku xiga horyaalka markii ugu horreysay tan iyo bishii Agoosto iyo September ee sanadkii 2015-kii.
>- Roberto Firmino ayaa ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo mid kasta oo ka mid ah 17-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu horyaalka ku ciyaaray garoonka Anfield, tan iyo guushii 2-1 ee ay ka gaareen Tottenham bishii Maarso sanadkii 2019-kii.